Sweden oo qiratay inay dalkeeda ka dhacday arrin sii mashaqayn karta musharraxnimadeedii NATO (Daawo) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Sweden oo qiratay inay dalkeeda ka dhacday arrin sii mashaqayn karta musharraxnimadeedii...
Sweden oo qiratay inay dalkeeda ka dhacday arrin sii mashaqayn karta musharraxnimadeedii NATO (Daawo)
(Hadalsame) 19 Juun 2022 – Sweden ayaa sheegtay in ay baarayso qoraallo baraha bulshada lagu baahiyey oo muujinaya calanka kooxda argagixisada ee YPG/PKK iyo hogaamiyohooda Turkiga u xukuman, Abdullah Öcalan, oo kasoo muuqday dhismayaal taariikhi ah oo ku yaala Stockholm.
“Farriimo iyo muuqaallo aan hayno sabab aan u aaminno in la farsameeyey ayaa lagu faafiyey baraha bulshada, iyadoo la sheegayo in Sweden ay taageerto kooxda PKK, tillaabooyin la gudboon ayaana la qaaday,” ayaa lagu yiri hadal kooban oo kasoo baxay WAD Sweden. Halkan ka DAAWO…
“Arrintani waa olole xun oo si ula kac ah loo maleegey kaasoo ujeeddada cad ee laga leeyahay ay tahay in lagu carqaladeeyo ku biiritaanka Sweden ee NATO,” ayaa la raaciyey qoraalka.
Sweden ayaa cambaareysay kooxda argagixisada ah ee PKK, iyo argagixisada iyo noocyadeeda kala duwan, sida qoraalku xusay.
Wasiiradda Arrimaha Dibedda Sweden, Ann Linde, ayaan waligeed wax taageero ah u muujin kooxdan argagixisada ah, waxayna si adag u diiddey muuqaalkan la farsameeyay iyo PKK, ayay raacisay warbixintu.
Degello baraha bulshada ah oo lala xiriiriyey YPG/PKK ayaa lagu faafiyey sawirro muujinaya calanka kooxahan iyo sawirka hogaamiyahooda oo la saaray dhismaha taariikhiga ah ee munishiibiyada magaalada Stockholm.
Waxaa sidoo kale sawirrada lagu dhejiyey derbiga Globen Avicii Arena Sports Hall. Safiirka Turkiga u fadhiya Stockholm, Hakki Emre Yunt, ayaa u sheegay Wakaaladda Anadolu Agency (AA) inuu shilkan hubiyey xili uu la kulmayey booliska diblomaasiyiinta.
“Booliska ayaa xaqiijiyey sawirka Globen Avicii Arena Sports Hall ee Stockholm. Booliisku wuxuu kaloo sheegay in sawirka la saaray hoolka taariikhiga ah ee munishiibiyada Stockholm ay u badan tahay inuu sax yahay,” ayuu yiri Yunt.
Warkan ayaa imanaya kaddib markii uu Jimcihii Sweden arrintan aad ugu dhaliilay Wasiir Dibadeedka Turkiga, Mevlüt Çavuşoğlu, isagoo sheegay inay tani dhaawacayso danaha Sweden, islamarkaana xaqiijiyey in wefdi ka kooban Ibrahim Kalın, Afhayeenka MW Turkiga ee Erdogan iyo Wasiir Xigeenka A. Dibedda Turkigu, Sedat Önal, ay maanta oo Axad ah u duulayaan Brussels si ay ula kulmaan madaxda NATO oo ay ugala hadlaan xubinimada ay doonayso Sweden & Finland.
Sweden iyo Finland ayaa bishii hore si rasmi ah u codsaday inay ku biiraan Gaashaanbuurta NATO – go’aankaas oo ka dhashay dagaalka Ruushku ku ekeeyey dalka Ukraine ee bilowday 24-kii Febraayo.
Yeelkeede, Turkiga oo muddo dheer xubin ka ahaa Isbahaysigan ayaa ka dhawaajiyey inuu diiddan yahay codsiga xubinnimada dalalkan, isagoo ku dhaliilay inay aad ugu dulqaataan oo ay xitaa taageeraan kooxaha argagixisada ee qaraxyada iyo dagaalka ka wada Turkiga.
Weerar ay Turkigu ku qaadeen godad ay argagixisada PKK adeegsato ee woqooyiga Ciraaq, howlgalka lagu magacaabo Operation Claw-Lock, ayaa horay loogu soo helay hub iyo agab ay Sweden samayso oo la siiyey PKK, walow ay mas’uuliyiinta Sweden oo ay ku jirto Wasiir Dibadeedka, Ann Linde, ay xilligaa beeniyeen inay gacan siiyaan argagixisada.
In ka badan 40 sano ayay tusaale ahaan, ol’ole argagixiso oo ka dhan ah Turkiga waxaa wadda fallaagada gooni-goosad doonka ah ee PKK, taasoo ay Ankara ku dartay liiska argagixisada, waxaa sidoo kale argagixiso u aqoonsan Maraykanka iyo Midowga Yurub – waxaana ay Turkigu ku eedeeyaan inay mas’uul ka yihiin dhimashada in ka badan 40,000 oo qof.
YPG iyadu waa garabka PKK ee Suuriya.
Previous articleShiinaha oo markii ugu horreeysey soo bandhigay markab uu 100% isagu samaystay oo dayuuradaha xambaara (Daawo)
Next articleMaanta DF Somalia waxaa u Madaxwayne ah Xil. Sacdiya Yaasiin Xaaji Samatar